Fanoherana ny fifidianana loholona :: Manam-potoana amin’ny famaliana ny fitorian’ny mpanohitra ny HCC • AoRaha
Fanoherana ny fifidianana loholona Manam-potoana amin’ny famaliana ny fitorian’ny mpanohitra ny HCC
Namaly ny endrika tsindry an-kolaka ataon’ny mpanohitra amin’ny famaliana an’ireo fitoriana mikasika ny raharaham-pifidianana loholona ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC). Nohitsian’i Jean Éric Rakotoarisoa, filohan’ny HCC fa tsy anjaran’ireo vondrona mpanohitra no mandidy na manery azy ireo amin’ny famaliana haingana an’ireo fitoriana ireo.
« Dinihina toy ireo raharaha rehetra mandalo eto aminay ireny fitoriana ireny. Tsy azon’iza na iza didiana amin’ny asany ny HCC, ka na matory herintaona ato aminay aza ny raharaha dia tsy misy afaka handrara an’izany », hoy itsy filohan’ andrimpanjakana itsy tamin’ ny antso an-tariby, omaly.
Nomarihiny fa « tsy voafetra ny fe-potoana hamalian’ ireo mpitsara eny Ambohidahy an’ireo fitorian’ny vondrona parlemantera mpanohitra ireo ». Fitoriana miisa telo momba ny fanakianana sy ny fitakiana ny fanafoanana ny fifidianana loholona no napetrak’ireo mpanohitra teny amin’ny HCC, tamin’ny 6 septambra 2020 sy tamin’ny tapaky ny volana septambra ary tamin’ ny 21 septambra lasa teo.
Mbola tsy nisy novalian’ ny HCC ireo fitoriana ireo, hatramin’ny omaly, na dia teo aza ireo fanambaràna indroa miantoana nitorohan’ireo mpanohitra an’ity andrimpanjakana ho « tsy manara-dalàna sady tompon’ antoka tamin’ny voalaza fa savorovoro politika teto amintsika ».
Nilaza fa nanao ampamoaka mikasika ny fomba fitsarana nataon’ny HCC mihitsy izy ireo, tamin’ny herinandro lasa iny.
« Azy ireo any izany », hoy fotsiny i Jean Éric Rakotoarisoa manoloana an’ireo fanakianana sesilany niantefa tamin’ny HCC. Na izany aza, nanamafy hatrany ny filohan’ny antenimierandoholona, Rivo Rakotovao fa « hiandry am-pitoniana ny valin-tenin’ny HCC ». « Tsy fanakorontanana akory no tanjona », hoy fotsiny izy.